Rugby – “Can 2020”: mihemotra ny daty fa tsy ho foana ny fifaninanana | NewsMada
Rugby – “Can 2020”: mihemotra ny daty fa tsy ho foana ny fifaninanana
Par Taratra sur 27/05/2020
Mbola voatazona avokoa ny fandaharam-potoana rehetra hiatrehana ireo fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ny taranja rugby. Tsy ho raikitra amin’ny daty efa voatondro kosa izany fa hisy fihemorana, izay tsy mbola voafaritra.
Na eo aza ny fisian’ny valanaretina coronavirus, tsy mbola namoaka fanambarana ofisialy, fanafoanana ireo fifaninanana karakarainy ny Rugby afrique, ho an’ity taona 2020 ity. Mbola mipetraka avokoa ny fandaharam-potoana rehetra, saingy mihemotra fotsiny ny fotoana hanatontosana izany.
Anisan’ireny ny lalao “repêchage”, hiatrehana ny lalao olympika (JO 2021), ho an’ny rugby lalaovina olona fito vehivavy. Mandray anjara amin’izany ny Makis de Madagascar. Tsiahivina fa tokony hotanterahina amin’ny volana jona ho avy izao izany lalao izany. Tsy mbola voafaritra kosa izay firenena hanatontosana izany.
Eo ihany koa fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can), rugby lalaovina olona 15 lahy. Fifanintsanana, hiadian-toerana hiatrehana ny ho tompondaka eran-tany “Mondial 2023”, hatao any Frantsa.
Raha ny voalahatra, tokony handray an’i Namibia ny Makis de Madagascar, ny 27 jona ho avy izao ary hanafika an’i Zambia, avy eo. Araka ny tsiliantsofina, mety hotanterahina any amin’ny faramparan’ny taona any, ireo lalao ireo raha tsy mitohy intsony ity valanaretina coronavirus, ity.
Tokony hiatrika izany ihany koa ny Makis vehivavy, izay handray an’i Afrika Atsimo ary ho any Kenya sy i Ogandà.
Tena mbola baraingo kosa ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (Top 6 Aroi). Hiankina amin’ny fahitan’ny mpikarakara mpanohana mantsy ny hanatontosana izany.
Distribution de carburant: activités limitées jusqu’à 18h 13/07/2020
Tourisme local: une campagne de promotion en vue 13/07/2020
Industrie et commerce: seuls les commerces essentiels sont autorisés 13/07/2020
Compagnie aérienne : 11,6 millions de dollars pour sauver Tsaradia 13/07/2020
Major League Soccer: un contrat de longue durée pour Métanire 13/07/2020